हाम्रा पाठ्यक्रम निकै ‘बोरिङ’ छन्, यो ‘बोरिङ’ कक्षा अनि पाठ्यक्रममा हामीले ‘प्रोजेक्ट वर्क’, भ्रमण, अनुसन्धानजस्ता विषय जोड्न जरुरी छ
एउटा चल्तीकै कथाबाट सुरु गरौँ । एउटा गाउँमा निकै सुक्खा लागेपछि गाउँलेहरूले इनार खन्ने निधो गरे । सबैजना मिलेर इनार खन्न निस्किए । एउटाले जंगलनजिक खन्ने भनेछ । सबै मिलेर त्यहीँ खन्न सुरु गरे । ५ फिट खनियो, १० फिट खनियो, १५ फिट खनियो, २० फिट खनियो तर पानी निस्केन । फेरि, अर्को ठाउँमा खाल्डो खन्ने निधो गरियो । फेरि ५, १०, १५ हुँदै २० फिटसम्म खनियो, फेरि पानी निस्केन ।
यसपालि खोलाको नजिक खन्ने भनियो, खनियो पनि, तैपनि पानी निस्किएन । अर्को ठाउँ खनियो, निस्किएन । यसरी पाँच ठाउँमा खन्दा पनि पानी निस्केन । उनीहरू निरास भएर थकित मुद्रामा चौतारीमा बस्दै थिए । यत्तिकैमा एकजना गाउँकै काका आएर सबैलाई के भयो भनेर सोध्छन् । सबै कुरा सुनेपछि उनले मुस्कुराएर भनेछन्, ‘केटा हो, तिमीहरूले हरेक ठाउँमा २०–२० फिट खनेछौँ । यदि ५ ठाउँमा २०–२० फिट खन्नुको सट्टा कुनै एक ठाउँमा एक सय फिट खनेको भए जुनसुकै ठाउँबाट पनि पानी निस्कन्थ्यो ।’
आज हाम्रो शिक्षा पनि छरिएको छ । कतै बाटोमै हराएको छ । यसले हाम्रा विद्यार्थीलाई एउटा दिशा दिन सकिरहेको छैन । आज विद्यार्थी दिशा र रुचि पहिल्याउन नसक्दा अलिकति डाक्टर, अलिकति इन्जिनियर, अलिकति सिए भएर बसेका छन् । आफ्नो विधामा उत्कृष्ट गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको प्रमुख दोष हाम्रो शिक्षालाई नै जान्छ । हाम्रो कक्षाकोठालाई नै जान्छ । यसलाई सुधार्नका निम्ति हामीले तीन ‘प’मा ध्यान दिन जरुरी छ । यी तीन कुरामा त, कक्षामा क्रान्ति नै ल्याउन जरुरी छ ।
व्यक्तिगत, सामाजिक अनि राष्ट्रिय दूरदर्शितालाई हाम्रो शिक्षा नीति अनि पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हामीले कल्पेको भविष्यका लागि आवश्यक रहेको जनशक्ति यो पाठ्यक्रमले पूर्ति गर्न सक्दैन । दुःख लाग्छ, हाम्रो पाठ्यक्रम अरू कुनै देशबाट ‘कपी पेस्ट’ गरिएको पाठ्यक्रम हो । हाम्रोमा विद्यार्थी अनि समाजको आवश्यकतालाई हेरेर हाम्रो पाठ्यक्रम बनाइएको छैन । तपाईंले, म यो पाठ्यक्रम किन पढ्दै छु भनेर सोध्नुहोस्, यसको उत्तर शिक्षकलाई थाहा हुँदैन । विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन । पाठ्यक्रम बनाउनेलाई पनि थाहा हुँदैन ।
हाम्रो पाठ्यक्रमले एउटा विद्यार्थीको सोच्ने तरिका नै विकास गर्न सकेको छैन । पाठ्यक्रमले सिकाइको दायरा घटाउने होइन, बढाउने हो । तर, आज हाम्रो पाठ्यक्रमले सिकाइको दायरा एउटा पाठमा सीमित गरिदिएको छ । लियोनार्दो दा भिन्चीले बनाएको मोनालिसाको चित्र किन उत्कृष्ट भयो ? किनकि त्यो चित्रमा, चित्र मात्र थिएन । कला थियो । विज्ञान थियो । चित्रमा प्रकाश कता छ र त्यसले कस्तो–कस्तो कति उज्यालो दिन्छ भन्ने विज्ञान पनि झल्किएको छ । नारीको हाउभाउबारे पनि उत्कृष्ट हिसाबमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यतिवेलाको समाजको रहनसहन र आभूषणलाई पनि दर्साएको छ । उक्त चित्रमा एउटा विषयले तमाम विषयलाई छोएको थियो । पाठ्यक्रम कति छर्ने, कति गहिरो बनाउने हामीले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनौँ । एक दिन केही व्यक्ति मिलेर अबबाट ‘म्याथ’ पढ्नुपर्दैन भन्ने निर्णय हुन्छ अनि बाँकी सबै रमिते बन्छन् । हिजो किन आवश्यक थियो अनि आज किन गणित अनिवार्य गरिएको छैन । यसको उत्तर कसले दिने ? हाम्रो पाठ्यक्रम छरिएको हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीलाई रुचि भएको विषयमा गहिरोमा पुग्न सकिने हुन जरुरी छ । गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय फरक–फरक होइनन् । एक–अर्कासँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
सेफले बनाएको तरकारी किन मीठो हुन्छ ? किनकि, सेफले नुन हाल्छ, चाख्छ । पुगेन भने फेरि थप्छ । आवश्यकताअनुरूप मर–मसला हाल्छ, चाख्छ । मिलाउँछ अनि बनाउँछ । बुझाइको मापन भनेको वर्षको एक दिनको परीक्षा होइन, यो त निरन्तरको प्रक्रिया हो ।
अहिलेको नेपाल सरकारको पाठ्यक्रममा एउटा विद्यार्थी सिर्जनशील हुनै सक्दैन । यसले सोच्ने, विश्लेषण गर्ने क्षमताको निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको रुचिको विषयलाई समेट्न सकेको छैन । हप्तामा दुई घन्टा पनि बच्चाले आफ्नो रुचिको विषय खोज्ने, पढ्ने प्रावधान हाम्रो पाठ्यक्रममा कहाँ छ ? तसर्थ, हाम्रो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको रुचिको विषयमा गहिरो जान सक्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छैन । मलाई राजनीतिमा रुचि छ । मेरा निम्ति निर्वाचनको डाटा, नारा, विधि, प्रविधि, इतिहास सबै आवश्यक छ । तसर्थ, एउटा विषयको गहिराइमा पुग्न मलाई विज्ञान, समाज, गणित, व्यवस्थापन सब बुझ्न जरुरी छ । किनकि, मलाई मेरो रुचि पहिल्याउँदै लक्ष्यमा पुग्नु छ । अब म गणित पढ्छु, गणित पढ्न होइन । मेरो रुचि वा लक्ष्यलाई गणितले सहयोग पुर्‍याउँछ भनेर ।
संसार नै हाम्रो किताब हो । किताबमा मात्र ज्ञान छैन । किताबकै पाठ्यक्रम पढाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । अनि, हाम्रा पाठ्यक्रम निकै ‘बोरिङ’ छन् । यो ‘बोरिङ’ कक्षा अनि पाठ्यक्रममा हामीले ‘प्रोजेक्ट वर्क’, ‘भ्रमण’, ‘अनुसन्धान’जस्ता विषय जोड्न जरुरी छ, ताकि विद्यार्थीले वास्तविक सिकाइको अनुभूति गर्न सकून् । शिक्षक वा स्कुलले पाठ्यक्रममा इनोभेसन ल्याउन जरुरी छ । कक्षामा हामीले एउटा कुनै विद्यार्थीको हजुरबुबा ल्याएर ‘हजुरबुबा’को कथा किन सुरु नगर्ने ? यस्ता सिकाइलाई पाठ्यक्रममा नै किन नहाल्ने ? यसले जति ज्ञान दिन्छ । समाज बुझाउँछ, सायद रटेर विद्यार्थीले नबुझ्लान् । १० वटा गाउँको बारेमा पढाउनुभन्दा एउटा गाउँमा लगेर त्यहाँको जीवन कस्तो छ भनेर छोटो अन्तर्वार्ता, अन्तर्क्रिया वा अनुसन्धान गर्न विद्यार्थीलाई लगाउने हो भने उनीहरूले धेरै कुरा सिक्छन् । यस्ता कुरा गर्न पाठ्यक्रम जस्तो भए पनि शिक्षक अनि विद्यालय स्वतन्त्र छन् । तसर्थ, पाठ्यक्रममा छैन भन्नु भनेको हामी पनि हाम्रो दायित्वबाट पन्छिनु वा हामीले पनि आधारभूत कुरा नबुझ्नु हो ।
दोस्रो, पढाउने विधि
कक्षा कोठाभित्र अर्को समस्या पढाउने विधिमा छ । हामीले पढाइरहेका छौँ, तर विद्यार्थीले बुझिरहेका छैनन् । शिक्षकले कक्षामा गएर एकोहोरो पढाएर कोर्स सिध्याएर मात्र पढाइ पूरा हुन्न । विद्यार्थीले कति बुझ्यो त्यो महत्वपूर्ण छ । अझ जीवनमा कति उतार्‍यो, त्यो झन् महत्वपूर्ण छ । शिक्षकले कक्षामा पढाएको अधिकांशले बुझ्दैनन् । किन बुझ्दैनन् ? किनकि, पहिलो, शिक्षकले आफ्नो स्तरमा रहेर पढाउँछन्, विद्यार्थीको स्तरमा होइन । दोस्रो, शिक्षक मात्र शिक्षक हो भन्ने हाम्रो गलत बुझाइ छ । शिक्षक मात्र शिक्षक होइन, एउटा विद्यार्थीका लागि प्रत्येक अर्को व्यक्ति अनि वस्तु शिक्षक हो । उसले त्यहाँबाट सिक्न सक्छ । हामी एउटा खलासी, डाक्टर वा चिया पसले साहुजीसँग गफ गरेर सिक्न सक्छौँ । एउटा कृषकसँग सिक्न सक्छौँ । तसर्थ, हामीले सिकाइको शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म एकोहोरोपन तोड्नैपर्छ ।
कक्षामा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन हामी चुकिरहेका छौँ । पढाउने विधिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीको संलग्नता छुटेको छ । कक्षामा विद्यार्थी अनि शिक्षकको छलफल निकै महत्वपूर्ण छ । पढाउनु भनेको सूचना वा तथ्यलाई विद्यार्थीको कानसम्म पुर्‍याउनु मात्र होइन । पढाउनु भनेको विद्यार्थीको व्यवहार अनि आचरणसम्म सुधार्नु हो । पढाउनु भनेको वितरण प्रणाली मात्र होइन । कला हो, ज्ञानलाई विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउने कला । वितरण प्रणाली मात्र रहने हो भने भोलि हाम्रा शिक्षकलाई युटुब, अनलाइन साइटलगायत प्रविधिले विस्थापित गरिदिनेछ । तसर्थ, प्रविधिको यो चमत्कारसँगै कक्षा–कोठालाई जोगाउन पनि हामीले शिक्षकमा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
हामी सुरुमै गाह्रो कुरा पढाउँछौँ । अनि, विद्यार्थीलाई तर्साउँछौँ । पढाउने विधि भनेको सुरुमा गाह्रो होइन । सुरुमा सजिलो प्रश्न गराउँदै, विद्यार्थीको मनोबल अनि आत्मविश्वास बढाउँदै सिकाउने हो । मलाई ‘खान एकेडेमी’लगायत केही संस्थाले गर्दै आएको तरिका पनि निकै महत्व्पूर्ण अनि उपयोगी लाग्छ । ‘खान एकेडेमी’ले विद्यार्थीलाई पाठको भिडियो अगाडि नै दिन्छ अनि विद्यार्थीले भिडियो घरमै हेरेर आउँछन् । कक्षामा विद्यार्थीले खोजेर ल्याएको सूचना वा नयाँ कुरासहित त्यसलाई प्रस्तुत गर्छन् । शिक्षकले त्यो वातावरण बनाउँछन् । कहीँ कमजोरी भयो भने सच्याइदिन्छन्, सहयोग गर्छन् । विद्यार्थीभित्रको सिर्जनशीलतालाई आगोझैँ ठोस्छन् । हामी अहिले कक्षामा हरेक वर्ष हरेक ब्याचमा शिक्षकको त्यही २० वर्षअघिको बुझाइको त्यही ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ भिडियो प्ले गरेर बसेका छौँ ।
‘विद्यार्थीले विद्यार्थी पढाउने’ मोडेल नै अबको शिक्षाको महत्वपूर्ण अंश हो । यो शिक्षकका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ । किनकि, शिक्षकले अब नयाँ भूमिकाका लागि नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । शिक्षकले अब कक्षामा राम्रो तयारी गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदै कक्षाको नेतृत्व सुम्पने गरी तयार पार्न आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई संलग्न गराउने विषयमा चाहिँ शिक्षकले चटके, बाटोको कलाकारबाट पनि सिक्न सक्छन् । एउटा चटकेले जसरी सबैलाई आकर्षण गर्न सक्छ, जेबाट त्यो आकर्षण सुरु गर्छ, यस्ता विषय मेरा लागि सधैँ पाठ हुने गरेको छ । कतिपय वेला त म उनीहरूको कलालाई टिपेर कक्षामा उतार्छु । यत्ति गर्न सके, अहिले मरेका कक्षा जाग्नेछन् । कल्पना अनि सपना बिउँझनेछन् ।
तेस्रो, परीक्षा प्रणाली
सन्दीप लामिछाने कुनै सर्टिफिकेट देखाएर राम्रो क्रिकेटर बनेका होइनन् । राजेश हमाल सर्टिफिकेट बोकेर सफल हिरो बनेका होइनन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सर्टिफिकेट देखाएर महाकवि बनेका होइनन् । महाकवि बन्छु भनेर कविता लेख्न सुरु गरेका पनि होइनन् । हाम्रो शिक्षाले अर्को रोपेको भ्रम भनेको ‘सर्टिफिकेट’कै हो । अहिले मानिस पढेको देखिन सर्टिफिकेट किन्दै छन् । शिक्षा सर्टिफिकेटमै सीमित हुनु शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । सिकाइ जहाँ पनि हुन सक्छ । बाटोमा, खेलमा, टिभीमा वा किताबमा । इनारबाट पानी तान्नु विज्ञान हो । तरकारी किन्नु नेगोसिएसन । आफ्नो तर्क बिकाउनु मार्केटिङ । तसर्थ, सिकाइको मापन होइन, सिकाइमा सुधार हुन्छ । मापन भएछ भने पनि केका लागि ? मापनपछि सुधारको बाटोमा त हाम्रो शिक्षा छैन । हाम्रो शिक्षाले यही सुधारको प्रक्रियालाई अनुसरण गर्न सकेको छैन ।
बुझाइ जाँच्ने दुई विधि हुन्छन्– रचनात्मक मूल्यांकन अनि सारांशित मूल्यांकन । सारांशित विधिबाट पाठ्यक्रम वा पाठको अन्यमा परीक्षा लिइन्छ । यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । अर्को, रचनात्मक विधिबारे हामीले खासै काम गरेका छैनौँ । यो विधिअनुरूप, वर्षको अन्तिममा होइन न कि प्रत्येक पाठ वा सिकाइमा प्रतिक्रिया लिइन्छ र सुधारिन्छ । सुझाब अनि सुधारको प्रक्रियाले नै सिकाइलाई बलियो बनाउने हो । सेफले बनाएको तरकारी किन मीठो हुन्छ ? किनकि, सेफले नुन हाल्छ, चाख्छ । पुगेन भने फेरि थप्छ ।
‘विद्यार्थीले विद्यार्थी पढाउने’ मोडेल नै अबको शिक्षाको महत्वपूर्ण अंश हो । यो शिक्षकका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ । किनकि शिक्षकले अब नयाँ भूमिकाका लागि नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । शिक्षकले अब कक्षामा राम्रो तयारी गर्न जरुरी छ ।
आवश्यकताअनुरूप मर–मसला हाल्छ, चाख्छ । मिलाउँछ अनि बनाउँछ । बुझाइको मापन भनेको वर्षको एक दिनको परीक्षा होइन । यो त निरन्तरको प्रक्रिया हो । मापन विधिको एउटा प्रश्न, अझै त्यो पनि सबैका लागि नहुन सक्छ । हामीले सबैलाई एउटा समान प्रश्न सोधेर उसले ल्याएको नम्बरभन्दा पनि उसको बुझाइलाई बुझेर त्यहीअनुरूपको सिकाइलाई अघि बढाउन जरुरी छ । ग्रेडिङभन्दा पनि एउटा बच्चाको ज्ञान अनि विचार प्रक्रियाको विकास गर्न जरुरी छ । एउटा विद्यार्थीले वर्षको ४० घन्टा सेवामूलक सामाजिक काम गर्नुचाहिँ उसको मूल्यांकन हो कि होइन ? यस्ता कुरा पनि हाम्रो मापन विधिमा समावेश गरिन जरुरी छ ।
एकजना साथी भन्दै थिए– स्कुलले शिक्षकलाई विश्वास गर्दैन, त्यसैले परीक्षा लिन्छ ।’ यो कुरामा केही हदसम्म सत्यता छ । अभिभावकलाई स्कुलको विश्वास छैन । स्कुललाई शिक्षकको अनि शिक्षकलाई विद्यार्थीको । परीक्षाभन्दा पनि सुरुमा शिक्षामा यो हराउँदै गएको विश्वास जोड्न जरुरी छ । अविश्वासमा टेकेर शिक्षा सफल हुन सक्दैन । अनि फेरि, बुझाइलाई मापन पनि त गर्न सकिँदैन नि ! सधैँ सही र गलत भन्ने पनि हुँदैन । तपाईं कसैको पेन्टिङ हेर्दै हुनुहुन्छ वा कसैको कविता पढ्दै हुनुहुन्छ वा गीत सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं ती कुरामा बग्नुहुन्छ । समर्पित हुनुहुन्छ । कतिपय विषय अभिव्यक्त गर्न पेपर र कलम मात्र पनि असमर्थ हुन सक्छ । तसर्थ, शिक्षामा जति परीक्षाले महत्व् पाइरहेको छ, त्यो अनावश्यक छ ।
कक्षामा छिर्दै गर्दा, पाठ मात्र होइन । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा समानुभूति पनि राख्न जरुरी छ । कसैको आज घरमा बुबा–आमाको झगडा परेको छ । कसैको बुबाले विदेशबाट पैसा नपठाएकाले शुल्क तिर्न सकेको छैन । कसैको युवाअवस्थामा पुग्दै गरेकोमा धेरै प्रश्न अनि शारीरिक परिवर्तन हुँदै छन् । केही भाइ–बहिनीले घरको कामले गृहकार्य गर्न सकेका छैनन् । परीक्षामा तपाईंले खोजेको राम्रो नम्बर ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यी कुरा शिक्षकले अनुभूति गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीलाई ‘तैँले जिन्दगीमा केही गरेर खाँदैनस्’ वा ‘तेरो भविष्य छैन’ भन्ने अधिकार कुनै पनि शिक्षकलाई छैन । त्यो वातावरण बनाउनका लागि दुईटा सर्त छन् । पहिलो, शिक्षक अनि विद्यार्थीको एक–अर्काप्रतिको आदर अनि विश्वास । दोस्रो, हाम्रो शिक्षा प्रणाली प्रतिस्पर्धामा होइन कि एक–अर्काको सहकार्यको मोडेलमा स्थापित हुन जरुरी छ ।
‘काठमाडौं फ्लाइङ स्कुल’ पढेर चराले उड्न सिकेको होइन । ‘नेपाल इन्टरनेसनल स्विमिङ स्कुल’ पढेर माछाले पौडिन सिकेको होइन । सिकाइ प्राकृतिक हो । शिक्षालय त सहायक मात्र हो । कुनै स्कुलले स्विमिङ पुल बनाउँदैमा त्यहाँ पढ्ने स्वतः पौडी खेल्न सिपालु हुने होइन, त्यसका लागि त विद्यार्थी आफैँ पोखरीमा हामफाल्नुपर्छ । कलेजै नपढेका मानिस पनि धेरै सफल भएका छन् भने विश्वविद्यालयमा धेरै अंक ल्याएका कैयौँ विद्यार्थी बेरोजगार छन् । हाम्रा विद्यालयले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । हामीले यो शिक्षाको इकोसिस्टमबारे गहिरिएर सोच्ने वेला आएको छ । हाम्रो शैक्षिक पथको पुनर्निर्माण आवश्यक छ । अब हामीलाई वैकल्पिक शिक्षा आवश्यक छ ।
भक्तपुरमा शिव सर्किट बन्‍ने
नेपाली विद्यार्थीले पत्ता लगाए चुरोटका ठुटा कुहाउने प्रविधि
दशैँमा घर जाँदा यी करोडौं आम्दानी गर्ने अमुल्य बिरुवा लिएर रोपौँ
फेसबुक तथा अन्य सामाजिक संजालका एकाउन्टहरु पर्मानेन्टली कसरि डिलिट गर्ने ? तल हेरौँ केहि टिप्सहरु
पहिलोपटक गणितको शब्दकोश
अर्जुनले बनाए ‘एन्टी रेप मेसिन’ (भिडियो)
मोवाइलको अत्याधिक प्रयोग गर्दा मृगौलादेखि स्वासप्रस्वासमा समस्या
घाँसेबाली खेतीः नगदको साथै बाँदर धपाउन समेत उपयोगी
दुगड समूह : ऊर्जाका परियोजनामा लगानी बढाउँदै